U-ERIN BRADSHAW WEISS UBUDALA, UMYENI, UMAMA, UKUBALULEKA KWENET, UMHLA WOKUZALWA - HOLLYWOOD
U-Erin Bradshaw Weiss Ubudala, umyeni, uMama, ukubaluleka kweNet, umhla wokuzalwa
U-Erin Bradshaw yenye yeentombi zokwenyani zikaTerry Bradshaw. Uninzi lwazo zonke, abantu ababukele u-E! Umjelo uyalazi eli gama kwinkqubo ebonakalayo yenyani ' Iqela leBradshaw ‘Oko konke malunga nobomi beNtshatsheli yeBhola eKhatywayo yeSizwe. Umhle mhlophe njengodadewabo URachel Bradshaw Ngubani omnye umntu onomdla kulo mboniso.
Ngoobani uErin Bradshaw uMama noTata?
U-Erin Bradshaw uyintombi kaTerry Bradshaw noCharlotte Hopkins. Utata wakhe ngowangaphambili I-NFL pro ophumelele izihloko ezine zeSupp Bowl ngelixesha (ngo-1974, 1975, 1978, no-1979) zePittsburgh Steelers.
ULacey Hester Luttrull (31).
Ukususela ngo-2020, uneminyaka engama-27 ubudala kodwa akazange abelane ngeminyaka yakhe ngqo kunye neenkcukacha zokuzalwa. Uzalelwe eUnited States kwaye ungowomlibo omhlophe.
Ngubani indoda kaErin Bradshaw?
U-Erin Bradshaw utshatile UScott Weiss Kwi-2017 emva komsitho wabucala e-Aubrey, eTexas ngoMeyi 6, 2016. Umyeni wakhe nguUmnini wenkampani kaScott Weiss Show Horsesevelisa amathole ali-10-15 ngonyaka ngamnye.
Kwakhona, uScott ngamanye amaxesha wenza imodeli yeCinch Jeans kwaye uya kumfumana kwi-Instagram njengokufuna ipolo kunye neehempe ezinamaqhosha.
umzingeli hoffman igolide ukukhawuleza
Bobabini bahlala ngoxolo kwaye bonwabile kwi Ifama yaseTexas , apho babelana ngothando phakathi kwamahashe.
Ngaba uErin noScott banabo abantwana?
Hayi! Kude kube ngoku, esi sibini asinabantwana. Kodwa, u-Erin Bradshaw uthanda ihashe eligama linguJohn Simon kwaye wamphatha njengomntwana wakhe. Indoda yakhe ikwabelana ngokudibeneyo noSimon.
Ukurhola kunye nexesha eliphambili lokufa
Usebenza kakhulu kwi-Instagram yakhe ixesha elininzi ngoku. Ke, uya kuyifumana iifoto zakhe kwi-Instagram apho abelana khona ngemifanekiso yakhe noJohn omdaka omnyama kwilokhwe yomtshato.
Ngapha koko, uJohn (ihashe) kunye no-Erin baphumelela u-Amateur Senior Western Pleasure kwii-PHA World Champions ixesha lesithandathu ngokulandelelana ngonyaka ka-2019. U-Erin ukwakhankanye kwi-Bio yakhe njengomama kaJohn Simon.
U-Erin Bradshaw Instagram
Uyakumfumana erhabaxa malunga nomyeni wakhe kwi-Instagram ngokuphumelela komboniso wehashe. Ezifana nokuvuyisana nomyeni wam omhle kunye ne-ELICIOUS kwi-Championship yabo kwi-Open Maturity Sweepstakes kwi # APHAWorldShow!
U-Erin Bradshaw weNet efanelekileyo
Ixabiso elifanelekileyo le-Erin Bradshaw liqikelelwa kwi- $ 15 yezigidi nge-2020.
Izigaba: Iwiki Umqala Tech-Iindaba
odlala umlawuli kwiimfazwe zeenkwenkwezi
mdala kangakanani ixesha lokulandela ixesha
itafile ebomvu uthetha iiresiphi
iiyure zokugcina ikhaya lesikhumbuzo sedepho
Kutheni uNick jonas eshiya ilizwi kwisizini ezayo
Umdlalo wevidiyo iminyaka yobudala